Tantara - Jiangxi Alutile Building Materials Co., Ltd.
Maherin'ny 20 taona ny Mazava ho azy fa sarotra, ALUTILE novolavola ary nitombo tamin'ny fikarohana sy ny fampiharana tsikelikely, ny akora vita amin'ny vy dia amidy firenena sy faritra maherin'ny 100 manerana an'izao tontolo izao, lasa orinasa manan-kery indrindra amin'ny indostria.
Manomboka 1995 ~ 2000
1995 Nanangana Jiangxi Hongtai Building Materials Industry Co., Ltd. (teo alohan'ny orinasa)
1998 Nahazo fanamarinana nahazoana alalana. an'ny rafitra fitantanana kalitao ISO9000.
Ny fandraisana anjara tamin'ny famolavolana ny fenitra nasionaly sinoa voalohany an'ny GB / T 17748-1999 an'ny orinasa ACP.
2000 Voatanisa ao amin'ny tetik'asa Nasionaly fanilo.
Fikambanan'ny indostrian'ny fanorenana sinoa 2002 - sampana fitaovana vita amin'ny plastika
2003 Nahavita laboratoara fanandramana feno ho an'ny rafitra rindrina vy.
2003 Atsangano ny laboratoara fonosana izay nandroso tamina entana feno fitiliana ho an'ny rindrina vita amin'ny lamba firakotra amin'ny indostria.
2003 Natsangana ny departemanta marketing iraisam-pirenena, nanangana tambajotra varotra manerantany.
2006 Ireo orinasam-pifandraisana voalohany nahazo ny anaram-boninahitra marika ambony an'i Shina teo amin'ny sehatry ny indostria.
2007 ALUTILE® vokatra nandalo fanamarinana Eoropeana CE.
2007 Fivarotana mandroso any ivelany any amina indostrialy.
2007 Mikasika ny angona andrana momba ny vokatra iraisam-pirenena mitovy amin'izany, nametraka ny fenitry ny orinasa izay misy index 19 manan-danja noho ny fenitra nasionaly China, izay nahatonga ny ALUTILE nahatratra ny haavon'ny kalitao toy ny marika iraisam-pirenena.
2008 lasa mpanjifa coil nankatoavina an'ny PPG any Shina.
2008 ALUTILE® ny vokatra dia nandalo ny fitsapana araka ny fenitra ASTM sy BS.
2009 Nomena loka ho "marika malaza any Shina".
2009 ny mpanjifa nahazo alalana an'ny American Hylar any Shina.
2018--, ALUTILE dia namorona fahaizan'ny famokarana 72 tapitrisa sqm hamokatra karazan-rindrina lambam-baravarana metaly maromaro, izay manana tsipika famokarana Aluminium Composite Panel, All-Dimensional Aluminium Core Panel (3A tontonana), Solid Aluminium Panel, Thermal Insulation Panel, Silicon Sealant Glue sns. Andian-tsarimihetsika mihoatra ny 20 karazana, niditra tamin'ny dia vaovao ny fikatsahana fotoana.